Ezempilo - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Ngenani elikhulayo lezinketho ze-e-commerce ezitholakala kubantu baseCanada, abantu abaningi ngokwengeziwe bakhetha ukuthenga imikhiqizo yezempilo ku-inthanethi kunokuba bayithenge kulezi zinsuku. Lo mkhuba ungabalelwa ezicini ezahlukahlukene ezahlukahlukene - ukunethezeka, ikhono lokuqhathanisa amanani, kanye nokungabi nawo ubunzima bokuhamba ungene endaweni ebonakalayo... Funda kabanzi
Izizathu Eziyisi-6 Ezenza Osaziwayo Benze Udokotela Wamazinyo Obuhle
Ukuhambela izingcingo nama-auditions, okhaphethi ababomvu, imibukiso yemiklomelo, izingxoxo, ukuqoshwa, nokuthwebula izithombe kungeminye yemicimbi embalwa evela osaziwayo. Phakathi nalezi zenzakalo, kufanele zibe seqophelweni eliphezulu, uma kungenjalo; ukubukeka okuphelele. Akugwemeki ukukhuluma nabanye osaziwayo, ipaparazi, nabalandeli babo kulezi zikhathi. Osaziwayo ba... Funda kabanzi
Izindlela ezi-7 ze-Homeopathic Zokukhulula Nokuvimbela Ukudangala Ngesikhathi Sobhubhane
Umhlaba manje uphila ngokugqashuka okunzima, okucindezelayo, okuyi-'COVID-19 Pandemic'. Phakathi nalokhu kuqubuka, ukuphelelwa ithemba kanye nokuphelelwa ithemba kungabangela umonakalo oqinile emoyeni, ngaleyo ndlela kwandise ukucindezeleka nokukhathazeka. Nakuba ikusasa lomnotho lingaqinisekile, ukuthuthukiswa okufika ngesikhathi kokwelashwa okufanele kuseyinselele futhi kudinga okuningi... Funda kabanzi
Izinzuzo Eziphezulu Ezi-5 Zokusebenzisa Imicamelo Ye-Buckwheat
Wenze lonke ucwaningo kumatilasi wakho omusha futhi ukhethe isivikelo sikamatilasi esingcono kakhulu. Manje, ukhetha iqoqo lemicamelo ukuncoma lokhu kuthenga okumangalisayo, uhlangabezana nemicamelo ye-buckwheat njengenketho. I-hull egcwele imicamelo ekuqaleni iyakudida ukuthi kungani leyo ingenza inketho enhle yesimiso sakho sokulala.... Funda kabanzi
best umatilasi umvikeli, Imicamelo ye-Buckwheat
I-Ruthless e-juice iwuphawu olusafufusa emhlabeni wonke olunochungechunge lwe-flavour emangalisayo, lezo zikusiza ukuthi ukhiphe ukuzethemba kwakho futhi zikhulise amandla akho emahlangothini ahlukahlukene. I-ruthless e-juice iwuphawu olusafufusa, oluzinze ngokuphelele eningizimu yeCalifornia futhi ngemizamo engapheli idala ama-e-liquids ahlaba umxhwele... Funda kabanzi
Kwangathi 11, 2020
I-Aromatherapy: Amafutha Abalulekile Azothuthukisa Amandla Akho
Ngokuvamile kunalokho, sizithola sisesimweni lapho emini bebade sibonakala sintula amandla emzimbeni wethu, futhi sizizwa sivilapha ukuhambahamba futhi sikhiqize. Ucwaningo luye lwaphetha ngokuthi kokubili izinguquko ezingokwengqondo nezokuphila kubangela ukuntuleka kwamandla. I-Aromatherapy iyindlela enhle yokugcina umzimba wakho usebenza phezulu ... Funda kabanzi
i-diffuser kagesi, amafutha abalulekile, kuthuthukisa umsebenzi wamagagasi obuchopho, ngcono ukusebenza
Kungani Kufanele Uvakashele Uchwepheshe We-ENT?
Ngaso sonke isikhathi, phakathi nenkathi yokushintsha kwenkathi, abaningi benu bahlushwa ikhala elibomvu, umphimbo ominyanisiwe, ukukhwehlela kanye nokubanda nobuhlungu bekhanda nentamo yonke. Kunabantu abaningi abavele bathathe i-paracetamol bese bethola ukukhululeka ezinkingeni. Futhi, ngonyaka ozayo, uhlushwa izinkinga ezifanayo. Uyazi ukuthi umubi kangakanani... Funda kabanzi
Ingozi Ephezulu Eyi-5 Ehilelekile Ku-Hypertension okufanele uyibheke
I-Hypertension, eyaziwa nangokuthi i-hipertensi emphakathini waseMalay njengoba ivamile njengoba kuzwakala, isifo esinamandla okuletha ukugula nokufa. Okwenza kube nzima ngisho ukulwa ukuthi lezi ziguli zivame ukungabi nazimpawu futhi azinazo izimpawu eziyisixwayiso. Ukuxilongwa kwenziwa kungaqondile lapho kufundwa umfutho wegazi... Funda kabanzi
Isibhedlela esihle Sokubelethisa siwukutshala imali yokuqala enganeni yakho
Ukukhetha isibhedlela sokubeletha esifanele cishe kungenye yezinqumo ezibaluleke kakhulu okudingeka uzenze ekuqaleni kokukhulelwa. Abanye bethu baze bacabange ukuthi isibhedlela sokubeletha singawenza muphi umehluko. Kubaluleke kakhulu ukuhlola isibhedlela sababelethisayo ngaphambi kokuthi uvume ukusikwa. Impilo kamama imnandi kakhulu... Funda kabanzi
Imibuzo wonke umuntu ayibuzayo nge-IVF
Ukukhulelwa nokuqala impilo entsha kungenye yemizwa eyanelisa kakhulu yobufazi. Futhi lapho uqala umndeni omusha, awuzwa nje kuphela injabulo yezwe kodwa futhi uzwa umuzwa wokubonga nganoma yini eyenzekayo eduze kwakho. Kodwa kuyadumaza futhi akugculisi uma wenza... Funda kabanzi
1 2 ... 5 IZITHUBA EZINDALA